lie - Synonyms of lie | Antonyms of lie | Definition of lie | Example of lie | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for lie
Top 30 analogous words or synonyms for lie
အမ်မီနမ် ၂၀၁၀ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာတော့ ခုနှစ်ခုမြောက်အဲလ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့ Recovery ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဲလ်ဘမ်ထဲက Not Afraid, Love the Way You Lie, No Love, Space Bound သီချင်းတွေဟာ ပြည်ပမှာသာမက ပြည်တွင်းမှာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ US Billboard 200 မှာလည်း No.1 ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ထရီဗီလီ ထရီဗီလီ (Trygve Halvdan Lie) (၁၆.၇.၁၈၉၆ - ၃၀.၁၂.၁၉၆၈) သည် နော်ဝေးလူမျိုး နိုင်ငံရေးသမား၊ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်၊ အစိုးရအရာရှိ နှင့် စာရေးဆရာ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၀-၁၉၄၅ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင် နော်ဝေး ပြည်ပြေးအစိုးရအဖွဲ့၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဖြစ် လန်ဒန်မြို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ မှ ၁၉၅၂ အတွင်း သူသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး၏ ပထမဦးဆုံးသော အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းခဲ့သည်။
ဂရစ်ဂိုရီ မာဂယ်လစ် ဂရစ်ဂိုရီ အယ်လက်ဆန်းဒရိုဗစ်ချ် မာဂယ်လစ် (; ) ( ဖွား) သည် ရုရှား-အမေရိကန် () သင်္ချာပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ လီးအုပ်စုများ (Lie groups) ရှိ ပိုင်းစသီခြား ဇကာကွက် အုပ်စုငယ်များ () နှင့် ပတ်သက်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ အတွက်၎င်း၊ အာဂိုးဒစ်ခ် သီအိုရီ () သုံး နည်းလမ်းများကို ဒိုင်အိုဖန်တင်း နီးစပ်ခန့်မှန်းခြင်း () ခေါ် ကိန်းစစ်များကို ရာရှင်နယ်ကိန်းများသုံး၍ နီးစပ်ခန့်မှန်းခြင်း ဘာသာရပ်၌ စတင်အသုံးပြုခဲ့ခြင်း အတွက်၎င်း ကျော်ကြားသူဖြစ်သည်။
ဗော့စတော့ ၁ The FAI rules in 1961 required thatapilot must land with the spacecraft to be considered an official spaceflight for the FAI record books. Although some contemporary Soviet sources stated that Gagarin had parachuted separately to the ground, the Soviet Union officially insisted that he had landed with the Vostok; the government forced the cosmonaut to lie in press conferences, and the FAI certified the flight. The Soviet Union did not admit until 1971 that Gagarin had ejected and landed separately from the Vostok descent module.
တိုင်ဖွန်း Typhoon-class submarines feature multiple pressure hulls that simplify internal design while making the vessel much wider thananormal submarine. In the main body of the sub, two Delta class pressure hulls lie parallel withathird, smaller pressure hull above them (which protrudes just below the sail), and two other pressure hulls for torpedoes and steering gear. This also greatly increases their survivability - even if one pressure hull is breached, the crew members in the other are safe and there is less potential for flooding.
ဟေလီယိုစဖီးယား Another hypothesis suggests that the heliopause could be smaller on the side of the Solar System facing the Sun's orbital motion through the galaxy. It may also vary depending on the current velocity of the solar wind and the local density of the interstellar medium. It is known to lie far outside the orbit of Neptune. The current mission of the "Voyager 1" and "2" spacecraft is to find and study the termination shock, heliosheath, and heliopause". Voyager 1" reached the termination shock on May 23–24, 2005, and "Voyager 2" reached it on August 30, 2007 according to NASA. Meanwhile, the Interstellar Boundary Explorer (IBEX) mission is attempting to image the heliopause from Earth orbit within two years of its 2008 launch. Initial results (October 2009) from IBEX suggest that previous assumptions are insufficiently cognisant of the true complexities of the heliopause.
ရှာကီရာ ရှာကီရာသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ တေးဂီတ လောကသို့ သူမ၏ ပဉ္စမမြောက် ၂၀၀၁ တွင် ထုတ်ဝေသော လောင်ဒရီဆားဗစ် (Laundry Service) အမည်ရသော အယ်လ်ဘမ်ဖြင့် စတင် ဝင်ရောက် လာခဲ့သည်။ ထိုအယ်လ်ဘမ် မတိုင်မီ အကြိုဆင်ဂယ်လ် အဖြစ် ထုတ်ဝေသော ဝှမ်းအဲဗား ဝှမ်းအဲဗား (Whenever, Wherever) သီချင်းမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၏ အရောင်းရဆုံး ဆင်ဂယ်လ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမ၏ အောင်မြင်မှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော Fijación Oral, Vol. 1 နှင့် Oral Fixation, Vol.2အယ်လ်ဘမ် ၂ ခုဖြင့် ပိုမိုခိုင်မာလာခဲ့ပြီး ထိုမှတဆင့် ၂၁ရာစု၏ အရောင်းရဆုံး သီချင်းဖြစ်သော Hips Don't Lie ကို မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ ရှာကီရာ၏ အဋ္ဌမမြောက် နှင့် နဝမမြောက် အယ်လ်ဘမ်များ ဖြစ်သော "She Wolf" (၂၀၀၉) နှင့် "Sale el Sol" (၂၀၁၀) တို့မှာ အားပေးမှု ခံခဲ့ရသော်လည်း သူမ၏ အက်ပစ်ရက်ကော့ တေးစီးရီး ကုမ္ပဏီနှင့် တင်းမာလာသော ဆက်ဆံရေးကြောင့် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး နည်းပါးခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက် တရားဝင် သီချင်းဖြစ်သော ဝါကာဝါကာ သီချင်းမှာ ကမ္ဘာ့ဖလား သီချင်းများတွင် အရောင်းရဆုံး သီချင်း အဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့သည့် အပြင် ယူကျုဘ်တွင် ကြည့်ရှုသူ သန်း ၇၂၀ ရှိသဖြင့် ပဉ္စမမြောက် ကြည့်ရှုသူ အများဆုံး ဗွီဒီယို အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ရှာကီရာသည် အမေရိကန် ဗားရှင်း အဖြစ်ရိုက်ကူးသော ဗွိုက်စ် တီဗွီ ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ဒိုင်လူကြီး အဖြစ် စတုတ္ထ ရာသီ နှင့် ဆဋ္ဌမ ရာသီတို့တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူမ၏ ဒဿမမြောက် အယ်လ်ဘမ် ဖြစ်သော ရှာကီရာ ကို ၂၀၁၄တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး အကြိုဆင်ဂယ်လ် အဖြစ်"Can't Remember to Forget You" ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဗွီ-၁ ဗုံးပျံ It isacommon myth that the V-1's Argus As 014 pulse jet engine neededaminimum airspeed of to operate. The Argus As 014 (also known asaresonant jet) could in fact operate at zero airspeed due to the nature of its intake shutters and its acoustically tuned resonant combustion chamber. Contemporary film footage of the V-1 always shows the distinctive pulsating exhaust ofafully running engine before the catapult system is triggered and the missile launched. The origin of this myth may lie in the fact that due to the low static thrust of the pulse jet engine and the very high stall speed of the small wings, the V-1 could not take off under its own power inapractically short distance, and thus required to either be launched by aircraft catapult or be airlaunched fromamodified bomber aircraft such as the Heinkel He-111. Ground-launched V-1s were typically propelled up an inclined launch ramp by an apparatus known asa"Dampferzeuger" ("steam generator") which used stabilized hydrogen peroxide and potassium permanganate ("T-Stoff" and "Z-Stoff"). Takeoff speed was .